Intengiso yezeMithombo yeendaba kuLuntu iya kwanda ngo-2021 njengeeNtengiso eziJonge ukuDibana nabathengi kwi-Intanethi
Abathengi abathengisi rhoqo kwi-Intanethi, kodwa kunokwenzeka ukuba baqale iihambo zabo zokuya kuthenga kwimithombo yeendaba. Amaqonga ezentlalo afana ne-Instagram kunye ne-Facebook yimithombo eqhelekileyo yokufumanisa uphawu kwaye oku kulindeleke ukuba kuqhubeke kuye kuthi ga ngo-2021, kunye nedatha entsha ebonisa ukuba ...
Izipho ezingapheliyo ziqinisekisiwe ukunika intuthuzelo enesitayile ngeliholide
Ngeli xesha leholide, amava eziphiwo anokujongeka ahluke kancinci kodwa ukufumana isipho esifanelekileyo seyona njongo. Njengokuba imozulu iya iqina kwaye abantu belungiselela ukuzimela emakhayeni abo, abathengi baya kuba bubulumko ukujonga izinto ezinikezela intuthuzelo, ukonwaba kunye nolwaneliseko. Ukupha ...
Zeziphi izihlangu endinokuzinxiba kwindiza
ngomphathi ku 20-11-23
Yiba nomfanekiso-ngqondweni wale ndawo: ukwisikhululo seenqwelomoya, iibhegi zipakishwe, ukhwela inqwelomoya. Uthatha isihlalo sakho, ubophe ibhanti yakho yokuhlala kwaye uhlale phantsi. Emva kwethutyana, iinyawo zakho ziqala ukwenzakala kuba awuzinxibanga izihlangu ezifanelekileyo- kwaye akukho nto ingako onokuyenza de ube ufika emhlabeni. Iphi iholide yakho ...
Ukukhutshwa kweNyaka eyi-10 yeSikhumbuzo seNyaka ye-Balanc yeeholide
Ibhalansi eNtsha kunye noJ. Crew bahlanganisene kwenye into oza kufuna ukuyongeza kuluhlu lweKrisimesi lwalo nyaka. Ukubhiyozela ishumi leminyaka eliqhubekayo lentsebenziswano, ii-brand zenze i-sneaker onokuyinxiba ngokubila okanye ukutyibilika kweli xesha leeholide. Ibhalansi eNtsha x J.Crew 997 10th Anniversary ...
Izitayile zeAdidas Yeezy Boost 380 'Onyx' ziyakhupha kule Veki
Icala elisecaleni le-Adidas Yeezy Boost 380 kwibala lombala le- "Onyx". Isibini seAdidas Yeezy Boost 380 imibala eyahlukileyo ibetha iivenkile kule veki. Ingxilimbela yemidlalo iqinisekisile ukuba isihlangu esenziwe ngu-Kanye West siyakhulula kwindawo ethi "Onyx Reflective" kunye ne "Onyx".
Usuku luka-Alibaba lwama-Singles lutsala ngaphezulu kwe-70 yeebhiliyoni zeerandi kwintengiso ukuza kuthi ga ngoku
Ukujongwa kwamanani aveliswe nguAlibaba kumnyhadala wokuthenga wee-Singles 'wonyaka. IAlibaba isonge ngokusesikweni umnyhadala wayo we-12th wonyaka we-11.11 we-Global Shopping Festival, eyaziwa kakhulu kwihlabathi liphela njengoSuku lweeNgoma. Ukulandela i-extravaganza yokuthenga, isimemezelo se-e-commerce behemoth ...
Itekhnoloji ye-Jumpman Shoe Nike's Auto-Lacing Tech ye-Iconic Air Jordan 11
IJordani Brand izisa itekhnoloji yeNike Adapt kwi-icon yeAir Jordan 11. Ingxilimbela yemidlalo ityhile namhlanje iAir Jordan 11 Adapt, isihlangu esixhotyiswe ngetekhnoloji eyaziwayo yokufaka amandla amandla eSwoosh. Nangona itekhnoloji ilele mihla, iJordani Brand iveze ukuba ukungabi nasiphelo ...
I-Simpsons kunye neeVans ziphinda zidibanise ukufika kweKrisimesi-iiteki ezinesihloko
Icala elikwicala le “The Simpsons” x Vans Slip-On “Holiday.” Iivenkile kunye nee "The Simpsons" ziye zadibana kwakhona, ngeli xesha kukhupha ingqokelela entsha yeziteki eziza kukwazi ukwenziwa ngabalandeli ngokwezifiso. Uphawu lwe skatewear kunye nomdlalo weqonga wexesha elide ...
Ngaba ezi zezona ziNtsingiselo zeSneaker zehlobo?
ngomphathi ku 20-06-05
Ukuba ujonge phantsi kwiiteki zakho uzibuza ukuba utata wakho we-retro akakhabi, sisenazo zonke iimpendulo ozifunayo. Lo nyaka unokuphawula ukuqala kweshumi leminyaka, kodwa ngandlela thile, ezinye zehlobo zentsingiselo yesitayile esikhulu zisibuyisela emva. (Khwaza uye ku ...
Abasebenzi bezonyango kwimigca yangaphambili ye-coronavirus kufuneka baqiniseke ukuba bacoca izihlangu zabo.
Kuphononongo olutsha olupapashwe kwelinye lamajelo oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo lweZifo, Izifo eziSulelayo eziSasazekayo, abaphandi bavavanya iisampulu zomoya kunye nomphezulu esibhedlele. Abaphandi bafumanise ukuba malunga nesiqingatha sabasebenzi bezempilo abasebenza kakhulu ...
Uqoqosho lwePandemic: Bathenga ntoni abathengi kwi-Intanethi nge-COVID-19?
Okona kukhula ngokukhawuleza kunye nokuNcipha kwe-E-Commerce iindidi Ubhubhane we-COVID-19 unefuthe elibalulekileyo kuzo zonke iinkalo zobomi, kubandakanya indlela abantu abazithengela ngayo iimfuno zabo, kunye nezinto ezingezizo eziyimfuneko. Ngeentengiso zentengiso ezikwi-Intanethi eziqikelelwa ukufikelela kumanzi ...